PharmEasy – Online Medicine Ordering App 4.8.11 Android အတြက္ Aptoide APK အား ေဒါင္းလုပ္ ျပဳလုပ္ပါ
ဗားရွင္း 4.8.11 လြန္ခဲ့ေသာ4ပတ္က
Application မ်ား ေဆးဖက္ဆိုင္ရာ PharmEasy – Online Medicine Ordering App
PharmEasy – Online Medicine Ordering App ၏ ေဖာ္ျပခ်က္
PharmEasy အိန္ဒိယနိုင်ငံရဲ့အမြင့်ဆုံး-rated အွန်လိုင်းဆေးဆိုင် App ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ app နှင့်အတူ, သင်အွန်လိုင်း ဝယ်ယူဆေးဝါးများ လုပ်နိုင်နဲ့ ကကို select လုပ်ပါမြို့ကြီးများအတွက် 24-48 နာရီအတွင်းသင့်အိမ် မှကယ်နှုတ်ရ။ အားလုံးသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်ဂရုစိုက်ဖို့အခု app ကို download လုပ်ပါ။
PharmEasy ဆေးဝါးအမိန့်များနှင့်ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုများစာအုပ်ဆိုင်မှ app ကို အသုံးပြု. သိန်း 50 ကျော်ဖောက်သည်ရှိပါတယ်။
PharmEasy သင်တို့ကိုလည်း ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန် , OTC ထုတ်ကုန်များနှင့် ဆေးဘက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ အွန်လိုင်းကိုဝယ်ခြင်းငှါခွင့်ပြုထားတဲ့အနေနဲ့ အွန်လိုင်းဆေးဝါးဖြန့်ဝေ app ကို ဖြစ်ပါသည်။ PharmEasy app ကိုနှင့်အတူသငျသညျမြားကိုလညျးသင့်အိမ်၏အဆင်ပြေစေရန်ကနေတတ်နိုင်ကုန်ကျစရိတ်မှာ အွန်လိုင်းအသွေးအားစမ်းသပ်မှုများအပြည့်ကိုယ်ထည်ဆေးနှင့်အခြားကြိုတင်ကာကွယ်ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှု အပါအဝင် အဖြေရှာတဲ့စမ်းသပ်မှု , စာအုပ်ဆိုင်နိုင်ပါတယ်။ ထုတ်ကုန်များ & န်ဆောင်မှုများကိုရှေးခယျြအကွာအဝေးအပေါ် 70% အထိရရှိနိုင်ပါအကြီးအကျယ်ဈေးလျှော့။
ကျွန်ုပ်တို့၏အိမ်တံခါးဆေးဝါးဖြန့်ဝေဝန်ဆောင်မှု 1000+ မြို့ကြီးများနှင့် 22000+ pin ကို codes တွေကိုဖုံးအုပ် Pan-အိန္ဒိယရရှိနိုင်ပါသည်။
diagnostic စမ်းသပ်မှု Ahmedabad, Bally, ဂါ, ချင်နိုင်း, Coimbatore, ဒေလီ, Dombivli, Faridabad, ဂန္ဒီနဂါး, Ghaziabad, Gurgaon, Hooghly, Hooghly ဧရိယာ, Howrah, Hyderabad Indore ကို Jaipur, Kalyan, Kolhapur, ကာလကတ္တားအပါအဝင် 40+ မြို့ကြီးများအတွက်ရရှိနိုင်ပါ , Lucknow, မွန်ဘိုင်း, Nagpur, Navi မွန်ဘိုင်း, Noida, Pune, Pune ဧရိယာ, Surat, သိမ်းခြင်းနှင့် Vadodara ။
ဆေးပညာအမိန့်: ကိုသင် PharmEasy နှင့်အတူအွန်လိုင်းဆေးဝါးများမိန့်နိုင်ပြီးသူတို့ကို select လုပ်ပါမြို့ကြီးများအတွက် 1-2 ရက်အတွင်းသင့်အပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိုမှတပါး, သငျသညျတိုင်းအမိန့်အပေါ် 20% ၏နိမ့်ဆုံးကယ်တင်မည်။ PharmEasy သာလိုင်စင်ရဆေးဆိုင်များအားဖြင့်ထောက်ပံ့စစ်မှန်သောဆေးဝါးများထောက်ပံ့ပေးသည်။
Diagnostic စမ်းသပ်မှု: ကိုသင်အွန်လိုင်းအခမဲ့နမူနာပစ်ကပ်နှင့်အတူကျန်းမာရေး packages များနှင့်စမ်းသပ်မှုများအပေါ်အထူးလျှော့စျေးအထိ 70% ကိုရရှိနိုင်သည်။ ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများအဘို့ဓာတ်ခွဲခန်းများနှင့်စာအုပ်ချိန်းကိုရှာပါ။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ္တူဘို့အတွက်ရွေးချယ်မယ်ဆိုရင်ရလဒ်သင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှကယ်နှုတ်တော်မူ၏လိမ့်မည်။
ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှု / OTC ထုတ်ကုန်: ကျနော်တို့ Patanjali, GSK, ဆရာတော်ကြီး, Accu-Chek, Omron, Dabur, Nestle ကနဲ့တူအမှတ်တံဆိပ်ကနေအွန်လိုင်းကြံ့ခိုင်ရေးနှင့်အာဟာရထုတ်ကုန်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးစောင့်ရှောက်မှု, ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုနှင့်ဆီးချိုရောဂါစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များကျယ်ပြန့်အမျိုးမျိုးကိုဆက်ကပ် နှင့်ပိုပြီး။ ကျနော်တို့ရောင်းချကြောင်းအရာများအားလုံးစစ်မှန်နှင့်စစ်မှန်သောဖြစ်ကြသည်။
လစဉ်ဆေးပညာ Refill: လစဉ် ပြန်. ဖြည့်အဘို့ငြင်းပယ်ခြင်းနှင့်အကြှနျုပျတို့သညျလစဉ်လတိုင်းသင့်ရဲ့ဆေးဝါးကိုလက်ခံရရှိကြောင်းသေချာစေရန်ပါလိမ့်မယ်။ လုပ်ရတဲ့နှင့်သောက်သုံးသောထွက်အပြေးမရှိစိုးရိမ်ပူပန်မရှိပါ။
1) ဆေးဝါး, ကျန်းမာရေးစစ်ဆေးမှုများနှင့် packages များစာရင်းတစ်ခုသို့မဟုတ်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်များ၏ကျယ်ပြန့်ကနေရှာလိုက်ပါ။ သင်တို့သည်လည်းသင့်ရဲ့ဆရာဝန်များကအကြံပေးဆေးပညာမှတ်စု upload တင်လို့ရပါတယ်။
3) ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်လက်လီအရောင်းဆိုင်သင်သည်သူတို့၏ပမာဏသို့မဟုတ်အဖြေရှာတဲ့အမိန့်၏အမှု၌ရောဂါရှာဖွေစမ်းသပ်မှုများနှင့်အတူလိုအပ်သည့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်အတည်ပြုရန်သင့်ကိုခေါ်ပါလိမ့်မယ်။ တစ်ဦးအဖြေရှာတဲ့နမူနာပစ်ကပ်၏အမှု၌, ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အေးဂျင့်သည့်အချိန်ကာလသတ်မှတ်အချိန်ကသင့်အိမ်ကနေသင့်ရဲ့နမူနာကိုစုဆောင်းပါလိမ့်မယ်။
4) ပြန်ထိုင်နေနှင့်အပန်းဖြေ။ ကျွန်ုပ်တို့၏မိတ်ဖက်ပေးပို့လူတစ်ဦးညာဘက်သင့်ရဲ့အိမ်တံခါးမှာသင့်ရဲ့ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုထုတ်ကုန်ကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမိတ္တူဘို့အတွက်ရွေးချယ်လျှင်ရောဂါရှာဖွေနမူနာပစ်ကပ်၏ဖြစ်ရပ်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ရဲ့လုပ်ဖော်ကိုင်ဖက်အေးဂျင့်ကိုသင်ဖို့အစီရင်ခံစာများကယ်နှုတ်တော်မူပါလိမ့်မယ်။
အဆိုပါ PharmEasy app ကိုယခု Download နှင့်တစ်ဦးလျှော့စျေးနှုန်းမှာအွန်လိုင်းဆေးဝါးများဝယ်ကြလော့။ သင်သည်သင်၏လစဉ်ဆေးဝါးပြန်စီ, သင့်အမိန့်ကိုခြေရာခံ, အခမဲ့ဆေးဝါးများပြန်လာနှင့် PharmEasy App ကိုသုံးပြီးကျွန်တော်တို့ရဲ့နောက်ဆုံးပေါ်ကျန်းမာရေး-related ဆောင်းပါးတွေကိုဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ်။
"PharmEasy အတူလွယ်ကူသောကြောင့်ယူပါ !!", သင့်ကျန်းမာရေးစောင့်ရှောက်မှုလိုအပ်ချက်နှင့်ပတ်သက်ပြီးမပိုစိုးရိမ်ပူပန်
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းကမ္ဘာ့ဖလား - http://businessworld.in/article/PharmEasy-Among-Most-Trusted-Brands-2016/12-07-2016-100326/
လိုအပျ permissions -
1) ကင်မရာ - သင်သည်သင်၏အကြံပြုဆေးဝါးများ၏ဓာတ်ပုံတစ်ပုံကိုယူခွင့်ပြုပါရန်
2) ဆက်သွယ်ရန် - လွှဲပြောင်းကုဒ်ဝေမျှဖို့သငျသညျကို enable ရန်
3) သိုလှောင်ရေး - သင့်ပြခန်းကနေပုံရိပ်တွေကို upload တင်ဖို့အတွက်
PharmEasy – Online Medicine Ordering App အတြက္ အသံုးျပဳသူ အဆင့္သတ္မွတ္ခ်က္မ်ား
PharmEasy – Online Medicine Ordering App အေပၚ ျပန္လည္စစ္ေဆးမႈမ်ား
PharmEasy – Online Medicine Ordering App အေပၚတြင္ ျပန္လည္ စစ္ေဆးမႈ မရွိပါ။ ပထမဆံုး ျပဳလုပ္လိုက္ပါ!
PharmEasy – Online Medicine Ordering App အား အခ်က္ျပပါ
hfk217 စတိုး 2.44k 12.49M
PharmEasy – Online Medicine Ordering App ႏွင့္ အလားတူေသာ အက္ပ္မ်ားကို ေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ
APK အေၾကာင္း PharmEasy – Online Medicine Ordering App အခ်က္အလက္
APK ဗားရွင္း 4.8.11
ထုတ်လုပ်သူ 91streets Media Technologies Private Limited
ကိုယ်ရေးလုံခြုံမှု မူဝါဒ https://pharmeasy.in/privacy-policy
Release date: 2019-06-23 06:41:57
လက်မှတ် SHA1: A8:11:10:72:5B:2B:E9:64:06:51:4E:C1:98:63:7E:8D:EA:C1:8B:3B
ထုတ်လုပ်သူ (CN): RAJ DHIRAVANI
အဖွဲ့အစည်း (O): ALGONATION LLP
PharmEasy – Online Medicine Ordering App APK ကိုေဒါင္းလုဒ္ဆြဲပါ